YEYINTNGE(CANADA): Sunday, August 16
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 8/16/20090အကြံပြုခြင်း
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားသား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းဖောက်ထွက်မှု
ယနေ့ (16.8.09) ညနေ (၆) နာရီခန့်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားသား ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတခုဖြစ်သော
KLIA ကန့်တွင် အကျဉ်းသားများ ဖောက်ဖျက် ထွက်ပြေးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ အခင်းဖြစ်ပွားပုံမှာ
ညနေ ထမင်းကျွေးချိန်တွင် လ၀က များကတံခါးဖွင့်ဝင်စဉ် အကျဉ်းသားလူအုပ်ကြီးမှ တွန်းထိုးပြီး အဆောင်အပြင်သို့
ထွက်ပြေး လိုက်ကြခြင်း ဖြစ်ပြီး KLIA ကန့်၏ ခြံစည်းရိုးသံဇကာများကို ဖျက်စီး၍ လူ(၃၀)ယောက် လွတ်မြောက်
သွားကြသည်။ အကျဉ်း သား(၅) ဦးကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးမိပြီး ကျန်လူများကို ဤသတင်းရေးသားချိန် ညပိုင်း (၉) နာရီ
ကျော်ခန့်ထိ ပြန်လည်မဖမ်းမိ သေးကြောင်း သိရှိရသည်။ KLIA ကန့်မှာ စုစုပေါင်း အဆောင်ရေ (၁၂) ဆောင်ရှိပါသည်။
လုံခြုံရေးအားနည်းကြောင်း လ၀က ၀န်ထမ်းသာရှိကြောင်း ကားလမ်းနှင့်ဂိတ်ဝသည်လည်း အလွန်နီးကပ်၍ ထွက်ပြေးရန်
လွယ်ကူကြောင်း သိရှိရ သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံရှိ ကန့်အသီးသီးတွင် မြန်မာလူမျိုးအများစုနှင့် နိုင်ငံပေါင်းစုံ နိုင်ငံခြားသားများ
ထောင်ပေါင်းများစွာ ဆင်းရဲဒုက္ခ များရောက်ရှိပြီး ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်း လုံးဝမရှိသဖြင့် TB တီဘီရောဂါ၊
အဆုတ်ရောဂါများအထိ ဖြစ်ပေါ်ခံစား နေကြရသည်။ အများစုဖြစ်သည့် မြန်မာလူမျိုးများမှာ (၆)လမှ တနှစ်ကျော်သည်အထိ
နိုင်ငံသို့ ပြန်မပို့ပဲထိန်း သိမ်းခံနေကြရ ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
(CP) – 22 hours ago
OTTAWA — The federal government has stayed the deportation ofaBurmese refugee who fled his country because he was he was forced into the military when he wasachild.
[8888peoplepower] ရယ်ချင်ရင်ရယ်လိုက်ကြ (၁၀)
download file http://ifile.it/9dy86nh
ရေကူးချန်ပလုံ ကို သာ သယ်ထုတ်သွားတဲ့ Rambo များ ..
BY မလေးမေ ... 8/16/20090အကြံပြုခြင်း
Canada grants Former Child Soldier stay of deportation and residency permit
Ottawa, August 15, 2009
Next Tuesday's deportation ofaBurmese refugee and former child soldier Nay Myo Hein has been halted following the intervention of Immigration Minister Jason Kenney and Public Safety Minister Peter Van Loan who have agreed to let the 25 year old Saskatoon resident stay in Canada on humanitarian grounds.
Minister Van Loan has issuedastay of deportation and Minister Kenney has granted Nay Myo Heinatemporary resident permit which crucially paves the way for Nay Myo Hein's permanent residency in Canada. CFOB especially thanks Minister Kenney for his vital role in Nay Myo Hein’s case and consistent support for the democratization process in Burma.
CFOB Executive Director Tin Maung Htoo calls “this compassionate gesture from Canada isamajor sigh of relief for our supporters of the Burmese democracy movement."As someone who at the age of 13 escaped from forced service in the Burmese military and spent the next eight years in hiding Nay Myo Hein would have faced grave danger if forcibly returned to Burma, in particular because since coming to Canada two years ago he has participated in demonstrations against the Burmese military and become an active member of the exiled Burma democracy movement.
Canadian Friends of Burma, which independently verified Nay Myo Hein life story, is extremely pleased that Minister Kenney has granted Nay Myo Heinatemporary residency permit.
CFOB wishes to thank all the people who came forward to assist Nay Myo Hein, especially, the hard work of Nay Myo Hein's Saskatoon lawyer Chris Veeman who worked tirelessly to help his client after being contacted on very short notice.
CFOB would like to give special thanks to the Saskatoon Burmese community and all those who sent letters and made phone calls in support of Nay Myo Hein.
For media contact, CFOB board member Kevin McLeod at 613-746-4963 and to contact CFOB Executive Director Tin Maung Htoo please call 613-297-6835
မလေးရှားနိုင်ငံရှိ တရားမ၀င်နိုင်ငံခြားသား ထိန်းသိမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း နှင့်ပတ်သက...
Canada grants Former Child Soldier stay of deporta...